EURO 2016: Group A oo soo af jarmay, Faransiiska oo koowaad ku soo baxay, yaa kaloo soo baxay?..+SAWIRRO – Gool FM
EURO 2016: Group A oo soo af jarmay, Faransiiska oo koowaad ku soo baxay, yaa kaloo soo baxay?..+SAWIRRO
(France) 19 Juunyo 2016. Waxaa soo gabo gaboobay wareega group ka A iyadoo uu xulka Faransiiska bar-baro 0-0 uu la dhaafi waayay xulka Switzerland, halka xulka Albania ay guushoodii ugu horreysay ka gaareen Romania oo ay ku mareen 1-0.
Ciyaartii Faransiiska iyo xulka Switzerland ee ku idlaatay 0-0.
Paul Pogba ayaa ahaa xiddiga ugu saameynta badan garoonka qeybtii hore isagoo sameeyay saddex fursadood oo gool loo filan karay mid uu birta ku dhuftay daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta iyo labo fursaadood oo kale oo uu ka mid ahaa mid uu goolhayaha ka bixiyay.
Faransiiska ayay inta badan kubbada lugtoodu ku jirtay laakiin xulka Switzerland qudhoodu dab yar ma ay shideen waloow aysan sameyn wax fursad oo halis ah qeybtii hore ee ciyaarta.
Goolhayaha xulka Faransiiska Lloris ayaa soo bar-bareeyay rikoodhka tababarihiisa Deschamps safashada kulamada xulkooda 45-kulan.
50%, 13 ka mid ah 26-ka kulan ee la ciyaaray Euro 2016 waxay qeybtii hore ku dhammaanayeen 0-0 oo ay ka mid tahay saddexdii kulan uu ciyaara Faransiiska.
Marka la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 74-aad xiddiga reer France Payet oo badel ku soo galay ayaa kubbad dhul ma dhacdo ah qabadsiiyay laad isagoona ku dhuftay birta kore. Sikastaba waa la is mari waayay.
Dhanka kale xulka Albania ayaa dhaliyay goolkoodii ugu horreeyay tartanka Euro kaddib kubbad dhinac ka timid oo uu madaxa ugu dhaliyay xiddigooda Armando Sadiku dhammaadka qeybtii hore ee ciyaarta. Wax gool ahna la iskama dhalin qeybtii dambe ee ciyaarta.
Group-ka A oo soo idlaaday ayaa waxaa koowaad ku soo baxay xulka Faransiiska halka Switzerland uu ku soo baxay labaad, Albania ayaa iyadu sheekadeedu wali tahay waa inay sugtaa.
Muxuu Lionel Messi ka yiri inuu bar-bareeyay RIKOODHKII Batistuta?
HOR DHAC : Slovakia v England